UMthembu ululeka ozakwabo ngobumqoka bokuheha abaxhasi
UBONGUMUSA Mthembu ongumsubathi wakuleli wamabanga amade osezakhele igama ngokunqoba iComrades Marathon amahlandla amathathu, weluleka ozakwabo kwezokugijima ukuba bafunde ukuzidayisa kubaxhasi yikhona bezokwazi ukuxosha kalula ikati eziko uma kufika izikhathi ezinzima.
Ukuvalwa kwezwe ngasekuqaleni konyaka ngenxa yobhubhane iCovid-19 kuholele ekutheni kuvalwe imiqhudelwano yaminyaka yonke efana neComrades Marathon egijinywa phakathi kweTheku noMgungundlovu, iTwo Oceans Marathon, egijinyelwa eKapa, neminye imijaho. Lokhu kuholele ekutheni abanye abagijimi badonse kanzima ngasezimalini.
UMthembu owanqoba iComrades ngo-2014, 2017, 2018, utshele Isolezwe ukuthi nakuba lo nyaka ubunzima kakhulu ngenxa yeCovid-19 kodwa ubonga uNkulunkulu ngokuthi akazwelanga kakhulu ngasohlangothini lwezezimali kwazise izinto zakhe uzihlela kusenesikhathi.
Uqhube wathi njengoba umhlaba-jikelele uhlaselwe yilolu bhubhane abasubathi mabafunde ukwenza izinto ezizokwazi ukuheha abaxhasi yikhona bezokwazi ukuthola imali yokuziphilisa ezikhathini ezinzima ezifuze lezi.
“Ngingasho ngithi lo nyaka kube ngonzima kakhulu kithina bagijimi njengoba sithembele kakhulu emijahweni esisuke siyingenele ekwazi ukusingenisela imali. Angifuni ukuqamba amanga, ukuhoxiswa kwemijaho eminingi ngenxa yeCovid-19, kusishayile kakhulu.
“Kodwa-ke nakuba kunjalo, mina kungisizile ukubuye ngibe nabaxhasi eceleni ngoba ngikwazile ukuphila kulesi sikhathi esinzima kangaka. Nginxusa kakhulu ozakwethu kwezokusubatha ukuba bafunde ukuzihlanganisa nezinto ezithinta imiphakathi ezifana nemikhankaso yokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Ngokwenza njalo lokhu kuyabaheha abaxhasi ngoba basuke bekwazi ukuthi uhlezi usemehlweni omphakathi.
“Bheka nje ngemuva kokuxegiswa kwemithetho mina ngikwazile ukuthola izimemo abanye abasubathi abangazitholanga eCape Town naseNorth West ngenxa yakho njalo ukuthi angihambeli kude nomphakathi,” usho kanje uMthembu odabuka eBulwer.